257; qof oo ku dhintay shil diyaaradeed Dalka Algeria – Radio Daljir
Abriil 11, 2018 1:57 g 0
Ugu yaraan 257 qof ayaa ku geeriyootay shil diyaaradeed oo ka dhacay Dalka Algeria,kaddib markii diyaarad Milatari oo ah nooca uu Ruushku sameeyo ku dhacday Garoonka Ciidanka Cirka ee Boufarik ee duleedka Magaalada Algiers .
Diyaaradda oo ahayd Ilyushin Il-76,oo ay leeyihiin Ciidanka Dalka Algeria ayaa waxaa ay wadday dad u badan Askarta dalkaas,waxaana ay dhacday daqiiqado kaddib markii ay duushay.
Wasaaradda Difaaca Dalka Algeria ayaa sheegtay in 247 Qof iyo 10 shaqaale ah oo la socday diyaaradda ay ku dhinteen shilkaas diyaaradeed ee ka dhacay duleedka Algeries.
TV ku yaalla gudaha Dalkaas ayaa sheegay in 26 ka mid ah dadka ku dhintay shilkaas ay ahaayeen xubno ka tirsan dhaq dhaqaaqa gooni isu taagga ee Polisario Front ee Gobolka Sahara,kaas oo sidoo kale ay milkiyaddiisa sheegato dowladda Morocco.
Algeria.24,website lagu magacaabo ayaa sheegay in Diyaaradda ay ku sii jeedday magaalada ku taalla galbeedka dalkaas ee lagu magacaabo Bechar.